Fanondranana olona : mila manokana tetibola ny fanjakana | NewsMada
Fanondranana olona : mila manokana tetibola ny fanjakana
“Zava-dehibe ny adidin’ny governemanta malagasy amin’ny ady amin’ny fanondranana an-tsokosoko olona”, hoy ny masoivohon’i Etazonia, Robert Yamate, nandritra ny fanamarihana ny Andro iadiana amin’ny fanondranana an-tsokosoko olona.
Mbola ezaka miandry ny governemanta ny fanokanana ny tetibola ilaina amin’ny BNLTEH sy ireo rafitra mandray an-tanana ireo niharan’ny fanondranana, ny fanamafisana ny ezaka fanenjehana sy fitsarana ireo ahina ho manao fanondranana olona an-tsokosoko.
Anisan’izany ireo manam-pahefana heverina ho mpiray tsikombakomba ary ny fanatsarana ny angom-baovao mahakasika ireo ezaka fampiharana ny lalàna. Mazava ho azy fa adidy mavesatra izany, saingy inoana fa tena ao tokoa ny finiavana sy ny fitozoan’ny governemanta malagasy.
Manatanteraka tetikasa maharitra telo taona ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fifindra-monina. Vatsin’ny governemanta vola mitentina 750.000 dolara izany. Tanjona ny hanamafisana ny fahaiza-manaon’ny governemanta malagasy amin’io ady io sy natao hananganana ireo rafitra rehetra ilaina amin’izany ady izany.
Efa nomarihin’ny tatitry ny Amerikanina fa tsy mahafeno tanteraka ireo fenitra farafahakeliny ho an’ny famongorana ny fanondranana an-tsokosoko olona ny fanjakana malagasy. Tsy naneho ezaka ny fitondrana raha ampihataina amin’ny fe-potoana notombanana teo aloha. Nahenan’ny fitondrana ny ezaka hitoriana sy hiampangana ireo nahina ho nanondrana an-tsokosoko olona.
Na teo aza ny fitombon’ny tatitra nilaza fa nisy tompon’andraikitra niray tsikombakomba nandritra ny taona, tsy nisy ny manam-pahefana nadinina tamin’izany, ary tsy nisy ny fanadihadiana natao mikasika ny tatitra nilaza fa nisy manam-pahefana nanamora ny fanondranana zaza tsy ampy taona hararaotina ara-nofo. Mbola tsy ampy hatrany ny lamina ofisialy ananan’ny fitondrana hamantarana haingana ireo niharan’ny fanondranana an-tsokosoko olona eo anivon’ireo mponina marefo.